Nidaamka Maaliyadda Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Bangiyada Soomaaliya & maalgashiga Guryaha
Nidaamka Maaliyadda Al-Shabaab
Kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab waxay ku xireen saamiga maaliyadeed guud ahaan Soomaaliya, oo ay ku jiraan magaalooyin badan oo ay kamid tahay magaalada Muqdisho, Brian Otieno oo u waramayay The New York Times ayaa yiri "hada ka dib ma aha kacdoon ee waa awood dhaqaale,".
“In kasta oo cunaqabatayn la saaray, xagjiriinta geeska Afrika ee Al-Shabaab waxay heleen habab ay ku qaataan lacago baad ah iyo maalgalin iyagoo adeegsanaya nidaamka bangiyada ee Soomaaliya” Guddi ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sidaas sheegay todobaadkaan.
Kooxda Al-Shabaab Malaayiin doolar ayay ka ururisaa canshuur bixinta balse waxay lacagta u soo mariyaan bangiyada maxalliga ah xitaa waxay ku maalgeliyaan guryaha iyo ganacsiyada, sida lagu sheegay warbixin cusub oo uu soo saaray Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, todobaadkaana shaaciyay Wargeyska New York Times.
Warbixinta waxay sharraxeysaa sida ay Al-Shabaabku ugu caan baxeen weerarada ismiidaaminta ah iyo tarjumaadda daran ee diinta Islaamka ee mamnuucaya waxyaabo badan oo nolosha bani-aadamka ku xeeran, si ay u ballaariyaan lacagaha ay ka helaan. Inkasta oo macaamil maaliyadeed in lala yeesho Al-Shabaab ay mamnuuc ka tahay sida ku cad cunaqabateynta Golaha Amniga, warbixinta ayaa lagu sheegay in kooxda ay heshay dariiqyo ay ku ballaarin karto macaamil ganacsi lacageed oo aad u adag iyadoo la adeegsanayo xisaabaadka bangiga iyo adeegyada Mobilada elektaroonigga ah si loo keydiyo, loo wareejiyo loona maalgaliyo.
Guddi khubaro ah oo ka socda Golaha Amniga oo dusha kala socda arrimaha Soomaaliya ayaa soo saaray warbixintaas, oo aan weli bulshada loo soo bandhigin.
Weeraradii dadka badan ay ku dhinteen ee Al-Shabaab waxay ku halakeeyeen Soomaaliya iyo Bariga Afrika oo dhan. Kooxda ayaa haysa qiyaastii 4,000 oo dagaalyahano ah, waxayna fidineysaa awooddeeda, iyagoo lacag ka soo uruurinaya hareeraha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho, ayaa lagu yiri warbixinta.
Ragga lagu helay inay ku lug lahaayeen weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen suuq ku yaal magaalada Nairobi ee dalka Kenya sanadkii 2013. Kooxda Al-Shabaab waxay heleen habab cusub oo ay ku sameystaan ​​kuna maalgashadaan saldhigooda Soomaaliya, sida ay sheegeen guddi ka tirsan Qaramada Midoobay.
Kooxda ayaa lacag ka qaadeysa gawaarida rarta badeecadaha, waxayna ka dalbanayaan ganacsatadu inay bixiyaan lacag bille ah isla markaana ay si xoog ah ku urursadaan Sakada (Sadaqada sanadlaha ah ee laga rabo muslimiinta inay bixiyaan)
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in Al-Shabaab ay sidoo kale gudaha u galeen dekedda Muqdisho, iyagoo si suuqa-madoow ah ugu diraya kuwa wax soo dajiya si ay uga bixiyaan canshuuraha badeecadaha. Dhammaan kiisaska warbixintan la diiwaan-geliyey, milkiilayaasha meheradaha ayaa lacag bixiyey, iyagoo ku andacoonaya hanjabaad iyo rabshad haddii ay diidaan.
Warbixinta waxaa lagu helay caddeymo muujinaya in howl-wadeenada Al-Shabaab ay lacagtaas ku keydsadeen kuna wareejiyeen akoonada uu ka howlgalo Salaam Somali Bank, oo ah Bangi hormuud ka ah Soomaaliya.
Bangiga oo ka jawaabaya ayaa sheegay inuusan waligiis u furin koonto shaqsi ama hay'ad cunaqabateyn saarantahay, iyo inuu qaaday talaabooyin aan la cayimin oo ka dhan ah xisaabaadka shakiga leh, laakiin meesha kama uusan saarin suurtagalnimada in Al-Shabaab ay heleen qaabab khiyaano leh oo ay ku adeegsadaan bangiga. Wasiirka maaliyadda ee dalka ayaa sidoo kale qiray awoodda ay Al-Shabaab u leedahay inay ka faa'iideysato nidaamka bangiyada wuxuuna ku tilmaamay maalgeliyeyaasha kooxda "kuwo aad u khiyaano badan."
Warbixinta ayaa timid dhowr bilood uun ka hor doorashooyinka muhiimka ah ee Soomaaliya, oo ah waddan ku yaal meel istiraatiiji ah oo ku taal Geeska Afrika oo soo maray wareegyo cilladaysan iyo jahwareer tobanaan sano. Waxay sidoo kale la dagaalamaysaa cudurka faafa ee coronavirus, tiro farabadan oo ayax ah oo baabiiya dalagyada iyo daadadka barakiciyay boqolaal kun oo qof.
Warbixinta ayaa si gaar ah u dhaleeceynaysa dowladda Soomaaliya oo ay taageerayaan Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Waxay ku adkeysteen in Soomaaliya ay qaaddo tillaabooyin ay ku casriyeyneyso bangiyadeeda si kooxaha cunaqabateynta saaran aysan uga faa’iideysan daciifnimada nidaamka sida Al-Shabaab.
"Adeegsiga Al-Shabaab ee nidaamka bangiyada rasmiga ah wuxuu awood u siinayaa in si dhaqso leh loogu wareejiyo loona qaybiyo tiro aad u badan, oo ay ku jiraan meelaha aysan sida tooska uga talin, taasoo meesha ka saareysa halista ah in lacago caddaan ah lagu daabulo dhulka cadawga ah," ayaa lagu yiri warbixinta.
Khubarada Golaha Amniga ee arrimaha Soomaaliya, oo ka kooban lix xubnood oo fadhigoodu yahay Nairobi, ayaa mas'uul ka ah la socodka u hoggaansamidda cunaqabateynta lagu soo rogay Soomaaliya. Guddigu wuxuu isla hawsha ka qabtay Eritrea, oo ah dal kale oo Geeska Afrika ku yaal, illaa 2018, markii cunaqabataynta laga qaaday kadib markii Ereteriya ay wax ka beddeshay xiriirkii ay la lahayd deriska Itoobiya.
Sannadihii la soo dhaafay, warbixinnada guddiga waxay baarayeen mowduucyo ay ka mid yihiin sida gargaarka cuntada ee Soomaaliya ay u weecisay qandaraaslayaal musuqmaasuq ah iyo sida howgallada bambooyin sameynta ee Al-shabaab ay u noqdeen kuwo casri ah.
Sanadkaan intiisa badan waxaa diiradda la saaray ilaha iyo dhaq dhaqaaqyada kooxda.
Muddadii warbixinta lagu guda jiray, laga soo billaabo Diseembar tii la soo dhaafay ee sanadkii hore 2019 illaa iyo Ogosto 2020, qorayaasha warbixintu waxay heleen caddeymo muujineya in Al-Shabaab ay usoo xarootay dakhli dhan 13 milyan oo doollar. waxaa ka mid ahaa qiyaastii $2.4 milyan oo laga soo qaaday isbaarooyinka yaalla gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya iyo $5.8 milyan oo laga soo xareeyay ganacsiyada magaalada dekedda leh ee kismaayo. Warbixinta waxaa ku jira nuqulada dib loo casriyeeyay ee rasiidhada macaamilkan.
Laba koonto bangi oo xiriir la leh Al-Shabaab oo ay bixiyeen tafaariiqleyda, shirkadaha maraakiibta iyo garaashyada gawaarida lagu iibiyo, waxay soo saareen in ka badan $3 milyan.
Warbixinta ayaa xiriirisay xawilaadaha iyo Bangiga Salaam Somali Bank. Labo koonto oo kala duwan oo ay dib u eegeen guddiga khubarada, mid helaya waajibaadka dekedda, midda kalena sadaqa aruurinta. Guddiga ayaa helay xogo badan oo dhigeysa lacag iyo xawilaadyo isdaba joog ah oo ka badan xadka $ 10,000 ee looga baahnaan lahaa bangiga inuu ku soo wargaliyo.
Mid ka mid ah koontooyinka, $1.7 milyan ayaa lagu wareejiyay gebi ahaanba 87 macaamil, iyada oo hal qof la siinayo $310,000.
Muddo 48-saacadood ah bishii Maarso, in ka badan $322,000 ayaa laga wareejiyey labadan koonto oo loo diray koontada bangiga saddexaad, ayay warbixintu tiri, taas oo muujinaysa "isku xirnaanta hay'adeed ee u dhexeeya xisaabaadka iyo qaab habeysan oo loo qaybinayo lacagaha."
Kooxda khubarada ah waxay duubtay wadar ahaan 128 macaamil ganacsi oo dammaanad ka qaadi lahaa in la shaaciyo Xarunta Warbixinta Maaliyadeed ee Soomaaliya, taasoo baareysa dhaqdhaqaaqyada lacageed ee laga shakiyo.
Dib u eegis lagu sameeyay xisaabaadka "ma aysan soo bandhigin wax sharci ah oo ka baxa ama qarash," ayaa lagu yiri warbixinta. Hadal uu soo saaray afhayeen u hadlay Salaam wuxuu ku sheegay in bangiga uu qaaday "tilaabooyin ku habboon oo ka dhan ah xisaabaadyo badan" oo la rumeysan yahay inay la xiriiraan "falal shaki leh." Bangiga ayaa sidoo kale sheegay in Qaramada Midoobay ay xiriir la sameysay baaritaanka gudiga laakiin tan iyo markii bangiga uusan helin "faahfaahinta akoonadan" uu "awoodin inuu go'aamiyo in talaabada ku haboon laga qaaday akoonadan."
Kadib tobanaan sano oo dagaal ah, Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay heer nabadeed, iyada oo u muuqata in ay dhiseyso hay'ado dowladeed oo shaqeynaya. Tan waxaa ka mid ah kormeeridda xarumaha maaliyadeed sida bangiyada iyo meel marinta sharciyada ka dhanka ah lacagta la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada.
Fulinta dawladda itaalka daran ee Soomaaliya ayaa wali ah mid aan ku filneyn, oo hortaagan caqabado badan, oo ay ka mid tahay la'aanta caddeyn baahsan oo aqoonsi sharci ah. Warbixinta UN-ka waxay xustay sida dukumiintiyada aqoonsiga ee loo furo xisaabaadka bangiga ee Al-Shabaab ay u heleen maalmo ka hor. Daraasad dhawaan la sameeyay ayaa sidoo kale muujisay sida nidaamka xawaaladaha aan rasmiga ahayn ee wadanka ee xawilaaduhu ay hoosta uga xariiqayaan iibka iyo ka ganacsiga hubka sharci darada ah. Wareysiga, wasiirka maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Bayle, wuxuu qirey adeegsiga baahsan ee ay Al-Shabaabku u adeegsanayaan nidaamyada maaliyadeed ee gudaha.
"Waxaan la kulannaa bangiyada waxaanan u sheegnaa khatarta ay ku sugan yihiin," ayuu ku yiri wareysi uu bixinayay. Isaga oo Al-Shabaab ugu yeeray “Maafiyada” ayuu yiri mar kasta oo ay masuuliyiintu xiraan hal daloolo, kooxda waxaay maanka ku haysay wado kale oo lacag lagu raro. "Kuwani waa dad aad u caqli badan oo aad u khiyaano badan," ayuu yiri. Warbixinta ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixisay nidaamka maaliyadeed ee si wanaagsan loo abaabulay ee kooxda Al-Shabaab, iyadoo lala socdo xisaab celin joogto ah si looga hortago qasaaro. Marka laga soo tago kharashaadka ku baxa sirdoonka iyo militariga, kooxdu waxay tobanaan kun oo doollar ku maal-galisay hanti iyo ganacsi Suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kaasoo iibiya badeecooyin kala duwan waana suuqa ugu weyn dalka ee furan.
“Natiijooyinka la helay waxay cadeynayaan sida ay Al-Shabaab ugu dhex milantay bulshada Soomaaliyeed” ayuu yiri Rashiid Cabdi, oo ah falanqeeye iyo cilmibaare ku xeel dheer Geeska Afrika.
"Hadda kuwani ma ahan kacdoon ee waa awood dhaqaale," ayuu Mudane Cabdi ku yiri wareysi taleefan. "Waa xaalad hoos ah oo canshuurta ka baxsan dowladda xitaa meelaha aysan xukumin Al-Shabaab” ayuu yiri, waxay noqonayaan urur aad u xididaystay, adkeysi leh oo aan ku tiirsanaan xoog ama awood milatari si ay u ahaato mid khuseysa.
Waa Warbixinta Keydmedia Online oo ay kasoo xiganeysa New York Times